Too abantu abaningi namuhla uyazibuza ngendlela ukubeka gidrostrelka ngalendoda (Ekhiqizako umdwebo ngezansi). Nokho, ngisho ochwepheshe abaningi ngokuhamba kwesikhathi ukuthoma ukuzwisisa bonyana ukusetshenziswa ezikhethekile separators wokubacindezela yokuxhuma boilers kuyinto ngempela buyindlela ephumelelayo ezingaba ukwandisa nekusebenta efakwe bafudumale system.
Izinkinga ubuchwepheshe elidala
Abantu abaningi bayazi ukuthi boilers ngaphandle amaphampu exhunyiwe zivame ezixhunywe ngokuqondile ngalendoda, nokuthi esikhundleni le ndlela kuvame kakhulu ukuba kusetshenziswe enjalo gidrostrelka ngalendoda (Ekhiqizako umdwebo ngezansi). lezi amadivaysi umane lakhishwa futha kubhayela, kanjalo amiselwe ngamunye Ukushisa wesifunda, kodwa eqinisweni inketho ezinjalo, ungasebenzisa hhayi kuzo zonke izimo, sengathi okwamanje kubhayela ngenkathi ulokhu ungaphansi kwe waranti, e ke kuwo ngeke ukususa amaphampu, kodwa uma sikhuluma a cast iron imbiza, esimweni ukususwa izingxenye zalo uma uqale uvule Ukushisa engase aqhume ngisho izingxenye ezihlukene kubhayela, akakwazanga ukumelana umehluko lokushisa ezinjalo.
Yini eyenza lobu buchwepheshe
Ukuze balahle konke sekulusuku isetshenziswa ezikhethekile gidrostrelka ngalendoda (wesifunda yokukhiqiza uvezwa sihloko). Le foni yakhelwe ukuhlukanisa wokubacindezela, futhi ukukhuluma kahle ehlukanisa kubhayela ngqo sokuhamba bafudumale. Ngakho, ngokwesibonelo, gidrostrelka ngalendoda (wesifunda bumbela lanemifanekiso) ungahlinzekela futha kuphela kubhayela, isistimu efakwe a amayunithi ezimbalwa ezifana ngezikhundla ezahlukene.
Idivayisi yalesi imishini ezinzima elula. Okwamanje, ngeke bangene iyiphi idivayisi zobuchwepheshe, futhi ucabangele kuphela embodiments eziyisisekelo lobu buchwepheshe.
Ngomqondo onabile, kwanele ukusebenzisa ucezu esezingeni ipayipi, okuyinto Yenziwe gidrostrelka (gidrorazdelitel). Ukubalwa gidrostrelki kuzokuvumela ukuba baqonde iziphi izici eyinhloko idivayisi anjalo kufanele kube nalokho kungcono ukusebenzisa izinto zokukhiqiza yayo.
Iyini injongo yayo
Okokuqala abaklami ozama uqhubeke kusukela lokuthi umcibisholo kwakudaliwe hydraulics ehlukile. Ngo iningi labantu amacala abakhiqizi namuhla bazama ukukhiqiza boilers anemisila futha ayo, futhi lezi amadivaysi Kunamandla ngokwanele.
Ngokwesibonelo, kukhona boilers ne uphawu omlilo chamber, lapho amaphampu esakhelwe ezifakiwe. Amandla amadivayisi okunjalo kungaba mayelana 300 Watts, kodwa empeleni aliyikwanela ukusunduza ngokuphelele uhlelo Ukushisa uma into isofthiwe kudinga 1,000 m 2, okungukuthi onjalo okusezingeni eliphezulu Ukushisa endaweni cishe imishini yakhelwe.
Kule ndaba, udinga ukukhweza amaphampu eyengeziwe, bese usebenzisa uhlelo combo. Kuyinto kulesi simo, esikhundleni sokuba sibazise futha, okuyinto ngokuyinhloko elisetshenziswa kubhayela, uyomane endleleni, futhi ezimweni ezinjalo kungaba gidrostrelka esetshenziswa (isabelo, ukubala, ukukhiqiza - ngalokhu kamuva esihlokweni). Kuyaphawuleka yokuthi imishini enjalo ephezulu amandla iningi elikhulu amacala ekuqaleni ezithunyelwa kusukela gidrostrelkoy ifektri ephelele, noma okungenani abe imiyalelo kuhle eqondile Ukuthi uxhumana kanjani ke.
kuyinto Uma uthatha le boilers ezincane, bese nabo isimo main ncamashi indzaba lefanako, kodwa kulokhu, usuvele unayo womshini yabo.
Gidrostrelka ogibele boilers phansi ngaphandle futha ihlanganiswe ukuvikela ngempumelelo kubhayela kusukela umehluko omkhulu kule okushisa ngesikhathi isiqalo wokuqala ohlelweni bafudumale. Ngokwesibonelo, ngokusebenzisa le imishini, standard boilers steel ingavikelwa kusukela idalwa condensate, ngenkathi idivayisi yensimbi kungenziwa kuvikelwe ngokumelene kungenzeka ukwehluleka izigaba zomuntu ngamunye.
Ukuze ugweme izimo ezimbi ezifana, sebenzisa gidrostrelka ezikhethekile. Imidwebo nemidwebo kubhayela kuleli cala, zidlala indima ebalulekile, njengoba kuncike izici isakhiwo evuthayo kumele sakhe esikhethiwe, futhi imishini ezihlobene. Into kuphela Kuhle kokusho - udinga ngisebenzise isifutho se-eyengeziwe ngoba ezihlukahlukene boilers ongaphandle.
Ekuqaleni, umuntu endlini yakhe ufuna uthole cishe ephelele bafudumale system, ukuchitha ngayo ngemali ephansi, futhi kulokhu, konke iqala isibilisi. Ukuze indlu encane yangasese, ungakhetha ekamelweni ejwayelekile kabili uphawu, okuzokwenziwa ogibele udonga. Ngakho-ke kubalulekile ukuba baqonde kahle, ukuthi ezimweni eziningi kunenzuzo ukuqinisekisa ukusatshalaliswa kahle kokupholisayo ohlelweni kungadinga siko ezenziwe Ukushisa ngalendoda gidrostrelki. Esimweni esinjalo kukhona ngempela umbuzo ejwayelekile: ukuthi ayisebenzise amaphampu yabo, futhi yini okufanele yenziwe ngedivayisi e kubhayela?
Kungokwemvelo ukuthi abantu abaningi ezimweni ezinjalo, uthanda nje ahlukanisa futha kusukela kubhayela, ukuze akazange bonakalise efakwe uhlelo wokubacindezela, kodwa eqinisweni ukuklanywa kwamanye amadivayisi senziwa ngendlela yokuthi ukwenza le nqubo akunakwenzeka ukuba aphumelele. Ezimweni ezinjalo, i solution enhle isiba ukuxhumana gidrostrelki kubhayela futhi ngalendoda.
Njengoba kulesi simo ezifakwayo
Ekuqaleni adonswa idayagramu ukusatshalaliswa ezininginingi. Njengoba isibonelo, cabanga ngalesi simo:
izifunda ezimbili underfloor.
Uhlelo izosebenzisa engaqondile Ukushisa kubhayela wesifunda, isifunda ezimbili ezisele for futha ukushisa noma ehlukile kubhayela kagesi, kanye gidrostrelki wesifunda, isb 5 wabuka.
Kulokhu, akukho eziyinkimbinkimbi mayelana nendlela ukudweba circuit ngalendoda - kwanele ukuba okungenani amanye kuvisisa indlela ukusebenza kwalesi simiso.
Ukukhiqiza futhi ukubala
Kuhle kokusho yokuthi ungakwazi self-lokulawula amandla ukuthi kungaba ukulahlekelwa yakho unhlokweni. Kanjani ukubala amandla, kufanele beze ngokuqondile izici ekamelweni lakho bese idivayisi.
Uma amandla amadivayisi oyithengayo awudingi, ukube bekunjalo sizokwazi usike ubukhulu intambo, kodwa ngesikhathi esifanayo ukwenza umcibisholo eside. Kwezinye izimo, amandla ingqikithi imishini uthenge kuyafaneleka ukunciphisa amandla up izikhathi ezimbili, njengoba, ngokwesibonelo, idivayisi 80 kW akudingeki kuzo zonke ekhaya, futhi ezimweni ezinjalo kuyoba elilungile ukushiya imishini nge namandla 40 kW.
Abanye abasebenzisa uhlelo yokukhiqiza gidrostrelki izandla zami siqu, uthanda ukuyifaka eduze ngokushesha eduze kubhayela, kodwa ochwepheshe abaningi bathi ukukhetha okuhle futhi ukufakwa yedivayisi ngalendoda okwagcina ivumela design ephelele nobunye, okuzoba eminye esetshenziswa kalula, zihlolwe futhi zigcinwe.
Kubhayela Ngakho ukukhwezwa cishe ezintathu amamitha endaweni ukufakwa umcibisholo, kuyilapho ukugeleza futhi ukubuya ulayini kubhayela kungenziwa agibele amahhashi ngokusebenzisa phansi uma isakhiwo likhona underfloor ikhekhe. Kukho konke, azikho umehluko oyisisekelo lapho isandla sakho izofakwa, futhi kube into eyinhloko Kulokhu - iyona ukufakwa imishini ngamandla ofanele futhi ngempela esimweni mpo. Uma wenze gidrostrelka for Ukushisa (Isikimu / ukubala ngenhla), lapho kubhayela efakwe ngaphandle valve ukuphepha, Kulezo zimo, kutuswa ukushisela phezulu idivayisi intshi ngentambo lokukhuphula iqembu elikhethekile nokuvikeleka.
Ingxenye engezansi libuye Kunconywa ukushisela intambo encane ukuvumela ukugcwaliswa evamile futhi nkinga umcibisholo. Isimo eyisibopho ingaphansi esiwusizo uthayi-e "kubhayela gidrostrelka futhi ngalendoda" couplings okukhethekile ukufakwa thermometer. Ngokuhamba ukusebenza obengeziwe kungenza ukuphila kwakho kube lula, njengoba kuzovumela ukuqapha isimo kohlelo bafudumale ngaphandle kobunzima.
Uma une ejwayelekile Welding umshini kanye nesipiliyoni imishini enjalo, kulesi simo, akukho nzima ukupheka wena gidrostrelku egcwele. Nokho, kubalulekile ukuba ukuqonde yokuthi ngokuhamba umsebenzi kufanele bacabangele inqwaba ubuqili.
Esikhathini sethu, akukho nzima ukuthola umdwebo gidrostrelki, kodwa kubalulekile ukuba ukuqonde ukuthi zonke lezi izibalo zihlukile futhi indlela ethile yokuma alikho. Ukwakheka gidrostrelki zonke Uchwepheshe ubona ehlukile, kodwa kunemithetho ethile ukuthi zisetshenziswa kuwo wonke umuntu.
Ngu uqobo, umcibisholo limelela esitsheni ezithile metal lapho amashubhu basuke eziphothene, senzelwe uxhumano kubhayela nokuqinisekisa ukunikezela ukubuya ukugeleza. Futhi e esishunyekiwe umthengi ukuxhumana.
amashubhu Ngokukhethekile ingasetshenziswa, eyenzelwe Ukubonakalisa othomathikhi phezulu isiqondiso kusungulwa. Engxenyeni engezansi umlomo wombhobho ifakiwe ngenxa crane ukunikela ezahlukene sokuhoxisa cuttings nokungcola. Ngaphezu kwalokho, kunoma iyiphi indawo Ungafaka futhi igatsha ipayipi ekunikezeni ukudla amanzi ohlelweni.
Umthetho obaluleke kakhulu ukuthi ngaso sonke isikhathi kufanele bathobele - okubizwa ngokuthi "umthetho diameters ezintathu," okungukuthi, ububanzi gidrostrelki uzibekela ukuba kathathu ngaphezulu kuqhathaniswa nale ipharamitha ku amapayipi. Uma bafuna gidrorazdelitel Ayikwazanga kahle sife ngaphandle zako ezisemqoka nemisebenzi, okungukuthi:
uhlukanisa slurry kusukela uhlelo;
yokululama umehluko wokubacindezela;
Udla evuthayo kubhayela amanzi ukunikeza ukuqina yayo enkulu.
Abantu abaningi bakhetha ukubeka imali futhi wenze siqu gidrostrelki polypropylene yakho, kodwa eqinisweni kuba isinqumo ngokuphelele ezenziwe ngokuyinhloko kubantu, hhayi kuphela ukuqonda izici lisebenze.
Kungenxa yalesi sizathu ukuthi kufanele usebenzise kuphela ephezulu grade metal amashubhu ezivumela amandla aphelele lobu buchwepheshe futhi ziyasebenza ngempela ukukhombisa ngokwayo kulo kwempilo kohlelo.
Uxhumano imitha ezintathu isigaba ugesi
Stone slate: sezindawo nobubanzi isicelo
Indlela yokuxilonga nokuphatha i-ecysema ye-dyshidrotic?
Chestnut ezidliwayo: izakhiwo ewusizo futhi izicelo kwezokwelapha
Kuphi ukushaya i-E100 "Emhlabeni wamathangi"?